राष्ट्रपति भण्डारीको विकल्प खोज्न लागिएको खुलासा, बालकोटमा हाइभोल्टेजको झड्का — Imandarmedia.com
१तीन करोड नेपालीका लागि दुखत: खबर, एमसीसी पासगर्ने देउवाको भित्रि सड्यन्त्र छताछुल्ल
२ओलीलाई महाधिवेशनबाट विदा गर्ने १० भाईको तयारी, बालकोटमा भूकम्प
३प्रचण्डले छापामार शैलीमा गरे सेनामाथि हमला, जंगीअड्डामा खैलाबैला
४माधव नेपाललाई अर्को धोका, कांग्रेसले तोड्यो महत्वपूर्ण सहमति
५घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग यौनसुख माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती, यस्तो छ भित्रि रहस्य
६आर्यनको जमानत खारेज, के गर्लान शाहरुख खान अब ?
७बालुवाटर काण्डले लियो चर्को रुप, केपीका बिश्वास पात्र बिष्णु पौडेललाई पक्राउ पुर्जी
८विमानस्थलमा लफडा, सांसद काण्डले मच्चायो हंगामा
९पारस शाहलाई सरप्राइज दिदै पूर्णिका शाह गरिन यस्तो घोषणा, पूर्वराज परिवारमा तरङ्ग
११एमाले नेता सुवास नेम्वाङ जाँड खाएर मातेपछि हंगामा, भिडियो सहित
१२उपेन्द्र यादवको पार्टीबाटै उठिबास हुने संकेत, शीर्ष नेताको भित्री सड्यन्त्र बाहिरियो
५कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा
काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनले एमालेको सरकार ढाल्यो । गठबन्धनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुर्याएपछि अब शीतलनिवासको पनि व्यवस्थापनबारे चहलपहल बढेको चर्चा सुरु भएको छ ।
केपी ओलीकै कारण विद्यादेवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारीको पद धरापमा पर्ने भएको छ। ओलीको एक्लो निर्णयले नै भण्डारी दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति भएकी हुन्।
भण्डारी र ओली मिलेर संविधानमाथि प्रहार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर जे गरे पनि भण्डारीले समर्थन गर्दै आएकी थिइन्। ओली प्रधानमन्त्री खुस्केपछि त्यसको असर राष्ट्रपतिलाई पनि परेको छ।
ओली आफ्नै दम्भ र घमण्डका कारण प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन्। नेकपाको नाममा पाएको जनमतको अवमूल्यन गरेका उनले ४० महिना २५ दिन सरकार चलाए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बनाइन लागेको खुलासा तत्कालिन प्रम ओलीले नै गरेका हुन् । यतिबेला एमाले ओलीपक्ष राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइने भन्दै चिन्तित छ । ओलीले निकटवर्तीहरुसँग भने ‘चोलेन्द्र, झलनाथ र रामचन्द्रमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेका छन् रे !’
‘यत्रो राम्रो काम गरिरहेको राष्ट्रपतिलाई यसरी गालीगलौज गर्ने ?’ ओलीले भने । ओली निवास बालकोटमा बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यबारे कुराकानी गर्नका लागि माधवपक्षका अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, मन्त्री केशव पाण्डे र प्रमुख सचेतक दीपक निरौला लगायतको उपस्थितिमा केही दिनअघि भएको कुराकानीमा ओलीलेचिन्ता व्यक्त गर्दै अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा, एमाले नेता झलनाथ खनाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्रमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाइने भन्दै नामै किटेका हुन् ।
सबै षडयन्त्रको हिसाव निर्वाचनबाट लिने ओलीको चेतावनी
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै षडयन्त्रको हिसाव आगामी निर्वाचनबाट लिने बताउनुभएको छ । युवा संघ, नेपालले ललितपुरको लुभुमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभयो ।
एमालेविरुद्ध एक्लाएक्लै लड्न नसक्ने भएकै कारण अन्य दलहरु एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । केही मान्छेहरु पार्टीबाट बाहिरिए पनि एमाले पार्टी नफुटेको अध्यक्ष ओलीको भनाई छ । रुखबाट पात पहिलिएर खस्नु स्वभाविक प्रक्रिया भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले त्यसले सिङ्गो एमालेलाई खासै फरक नपर्ने बताउनुभयो । नुहाउँदा पनि एक दुईटा कपाल झर्छ त्यसले फरक पर्दैन उहाँले भन्नुभयो ।
जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई षडयन्त्रले अपदस्त गरेर मुलुकमा प्रतिगमन ल्याउने प्रयास भएको बताउनुभयो । यो प्रतिगमनलाई ढाल्न र मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन युवाले संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । भविष्यलाई अन्धकारतर्फ जान नदिन युवा स्यवयम् संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाउनेहरु गलत बाटोमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “देश बनाउने अभियानको महासागररुपी पार्टीभित्र पौडी खेल्न पुगेन भनेर केही मान्छे अलग भएका छन्, त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन ।” सम्झाएर, बुझाएर नसकिए पछि उहाँहरु अलग भएको बताउनुभयो । “जति गर्दा पनि पार लागेन, सम्झाउन सकिएन” उहाँले भन्नुभयो । केही मानिस अलग भए पनि पार्टीभित्र नयाँ पालुवा पलाइरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
युवा नेता महेश बस्नेतले अध्यक्ष ओलीलाई परास्त गर्न मुलुकका सबै शक्ति लागेको भए पनि सफल हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो । एमालेरुपी जहाजलाई सहीरुपले सेफल्याण्डिङ गरिएको चर्चा गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेता बस्नेतले भन्नुभयो, “एमाले एकतावद्ध रुपले अघि बढ्छ, अरुको जस्तो कसैको टाङमुनि छिर्दैन ।” रुखका बुढा पातहरु झरेर पार्टीलाई खासै नोक्सान नहुने उहाँले बताउनुयभयो ।
एमाले नेतृ सुशीला नेपालले नेपाली महिला अहिले पनि पीडाबाट मुक्त हुन नसकेकाले राजनीतिक, सामाजिक संघर्ष जारी रहेको बताउनुभयो । महिलाको अधिकार सुनिश्चित गराउन महिला नै नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । दूरदराजमा बस्ने महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको जीवन जिउन बाध्य रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
माधव नेपालको रोडम्याप : सत्ता, संगठन र गठबन्धन, ओली पक्षलाइ देखाइदिने
नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने यसअघि नै तय थियो । तर २ भदौमा एमालेबाट अलग भएको यो दलले वैधानिकता नपाएकाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार समेत रोकिएको थियो । ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएपछि शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छौं । मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मन्त्रीहरुको नाम पठाउँछौं’, स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भूसाल भन्छन् ।
एकीकृत समाजवादीले यसअघि पाँच मन्त्रालय पाउने सहमति भएपनि फेरि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु बसेरे निर्णय गर्न बाँकी छ । एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका मध्ये अधिकांशले सरकारमा जान इच्छा गरेकाले मन्त्री संख्या बढाउन अध्यक्ष नेपाललाई दबाव बढेको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधिसभाका २६ सांसद र राष्ट्रियसभाका आठ सांसद उभिएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली र तुलसा थापाले प्राविधिक कारणले एकीकृत समाजवादी दर्ता हुँदा सनाखत गर्न पाएनन् । राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टले पनि सनाखत गर्न पाएकी थिएनन् । नेताहरुका अनुसार आइतबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक टुंगो लाग्नेछ ।
अर्थात्, संघीय सरकारमा सहभागी हुने एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकता देखिन्छ । गएको २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले माधव नेपाललाई फर्केर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नगरेकाले पनि एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिरिषद्मा नेपाली काँग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री छन् । ‘हामीले संसद् पूरा कार्यकाल जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका छौं । अब अलग दल पनि बनिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु ठूलो कुरा भएन’, केन्द्रीय सदस्य जगनाथ खतिवडा भन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध उभिदै अलग पार्टी बनाउन पुगेका माधव नेपालको आगामी रोडम्याप पनि सत्ता साझेदारीबाटै शुरू हुने देखिन्छ । चाँडै संघीय सरकारमा साझेदारी गर्न लागेको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वतिर पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।
विशेषगरी प्रदेश-१ र बागमती सरकार बदल्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू लागिपरेका छन् । १०बुँदे सहमति गरी एमालेमै रहेका भीम आचार्य प्रदेश-१ मा बिहीबार मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २ भदौमा अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । तर माधव नेपाल छोडेर मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका दुबैलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेताहरु सक्रिय भएका छन् । ‘उहाँहरु त अलग पार्टीका नेता नै भइसक्नुभयो नि । पार्टी नमिलेपछि समर्थन रहने कुरा भएन’, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजन राई भन्छन् ।
नयाँ दल दर्ता गराउन काठमाडौं आएका उनी, राजेन्द्र राई सहित विराटनगर फर्किसकेका छन् । प्रदेश-१ मा एकीकृत समाजवादीतिर १० सांसद उभिएको राजन राई दाबी गर्छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसद थिए भने आचार्यको पद जोगाउन ४७ सांसद आवश्यक छ ।
राईले दाबी गरे जस्तो १० सांसदद एकीकत समाजवादीमा आए मुख्यमन्त्री आचार्यको पद जोगिने बाला छैन । प्रदेश-१ मा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
बागमती प्रदेशसभामा पनि शाक्यको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीकै नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ । १०९ सदस्यीय (पशुपति चौलागाइँको निधन भएको) बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसद छन् । दुई जना सांसद मात्रै एकीकृत समाजवादीमा भएपनि शाक्यले विश्वासको मत पाउने छैनन् ।
अन्य प्रदेशमा एमाले विपक्षी दल बनिसकेको छ । यद्यपि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा माधव नेपाल समूहका नेताहरु थिए । कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गर्दा सांसद पद गुमाएका तीन जना मन्त्री छन् ।
सूदूरपश्चिम प्रदेशमा त माधव नेपाल समूहको बहमुत भएकाले माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेर मन्त्री भएका थिए । यो प्रदेशमा नेपाल समूहको नेता भीम रावल एमालेमा रहेपछि प्रदेश सांसदहरु विभाजित छन् । तर एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन सरकार कायमै रहने देखिन्छ ।
एकीकृत समाजवादीको बलियो प्रभाव प्रदेश-२ मा छ । एमालेका २१ सांसद मध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीमा लागेको प्रदेशसभा सदस्य बेची लुंगेलीले बताइन् ।
लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र र गण्डकीमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । यद्यपि दुबै प्रदेशमा माधव नेपाल समूहको उपस्थिति निकै कमजोर छ । प्रदेशसभामा रहेका माधव समूहका सांसदहरु कता लाग्छन् अझै खुलेको छैन । एक नेताका अनुसार, एकीकृत समाजवादीतिर उभिने सांसद मन्त्री बन्नेछन् । अर्थात्, अबको केही समयमै एकीकृत समाजवादी संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा जाँदैछ ।
संगठन र गठबन्धन
सत्ता साझेदारीसँगै एकीकृत समाजवादीले संगठन निर्माणलाई जोड दिने नेताहरुले बताएका छन् । ‘सत्ता तत्कालको कुरा हो, मुख्य पार्टी र संगठन हो । हाम्रो ध्यान पार्टी पुनर्जागरणमा जानेछ’, खतिवडा भन्छन् । दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्या जुटाएपछि अब एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको ध्यान प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीमा जाने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिने समयभित्र धेरै भन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो पार्टीमा ल्याउन नेताहरु परिचालित भइसकेका छन् । नयाँ पार्टीमा जानबाट रोक्न एमाले नेताहरु परिचालित भएकाले एकीकृत समाजवादीले पनि यसतर्फ धेरै जोड दिएका छन् ।
४-५ चैतपछि समानान्तर रुपमा बनेको संगठनहरु एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरित भइसकेको छ । केही ठाउँमा रिक्त भएका छन् भने त्यो पूर्तिमा जोड दिन्छौं’, स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल भन्छन् । ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एमालेको एकता हुनुअघि ४२ जिल्लामा माधव नेपाल तर्फका अध्यक्ष थिए । बाँकी जिल्लामा पनि ४-५ चैतपछि समानान्तर कमिटी बनेको थियो । ‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको पार्टी संरचना निर्माणमा विशेष रुपमा परिचालित हुनेछौं । जनसंगठनहरुको धेरै समस्या छैन’, भुसालको भनाइ छ । युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियू, अखिल किसान महासंघ, अखिल महिला संघ जस्ता ठूला जनसंगठनमा बनेको समानान्तर कमिटी पूरै एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएकाले सहज भएको भुसाल बताउँछन् ।
तर ८ भदौमा मात्रै दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरी लामो समय माधव नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका १० जना एमालेमा बस्दा एकीकृत समाजवादीलाई चुनौती थपिएको छ । एमालेमा दोस्रो तह भनेर चिनिने र भावी नेतृत्वकै रुपमा हेरिएका नेताहरु एकीकृत समाजवादीमा गएका छैनन् ।
यी नेताहरु एमालेमै बस्दा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्व टुंग्याउन समेत समस्या देखिएको छ । ८ भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष नेपाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहेको स्थायी कमिटी बनाएको छ । अब स्थायी कमिटीले सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी लगायत सांगठानिक संरचना तय गर्ने भएको छ । एमाले छोडेर ६० केन्द्रीय सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । तर राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने तयारीमा नेताहरु लागिपरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीको अर्को रोडम्याप हो, गठबन्धनको निरन्तरता । विशेषगरी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको साझेदारीलाई पार्टीकै ‘लाइफ लाइन’कै रुपमा नेताहरुले हेरेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग त २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्रै अलग भएका थिए । ‘राजनीतिक रुपमा हामी एकैठाउँ थियौं, तर प्राविधिक रुपमा अलग भयौ । अब पनि साझेदारी रहन्छ’, एक नेता भन्छन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग पनि कतिपय स्थानमा साझेदारी हुनेमा समाजवादीका नेताहरु विश्वस्त छन् ।
वामदेवसँग वार्ता !
२०७१ को नवौं महाधिवेशनदेखि एकैठाउँमा रहेका १० स्थायी कमिटी सदस्यले छोडेपनि एकीकृत समाजवादीले पुराना नेताहरु तान्ने प्रयास कायमै राखेको छ ।
२०३२ मा बनेको कोकेका संस्थापकमध्ये माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र मुकुन्द न्यौपाने पार्टीमा भएकाले एमालेको बिरासत बोक्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले दावी गर्ने गरेका छन् । त्यही सन्देश दिन स्वास्थ्य समस्यामा रहेका प्रदीप नेपाल डोर्‍याएरै निर्वाचन आयोग पुर्‍याइएको थियो ।
कोकेका संस्थापक अमृत बोहोरालाई समेत एकीकृत समाजवादीमा राख्ने अन्तिमसम्म प्रयास भयो । तर उनी एमालेमै बसे । अहिले राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ । गौतमले पनि सहमति गरेर एमाले छोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘वामदेव कमरेडसहित हामी एकीकृत समाजवादीमै जाने सम्भावना धेरै छ, तर कुरा मिलिसकेको छैन’, गौतम निकट एक नेता भन्छन्।
कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा